Chine: mitalao amin'ny Filoha Rajoelina ny mpianatra Malagasy -VIDEO- - jeannotramambazafy.overblog.com
Publié le 23 Juillet 2013 par Jeannot Ramambazafy
Chine: mitalao amin'ny Filoha Rajoelina ny mpianatra Malagasy -VIDEO-
Mpianatra malagasy any Sina mandray ny vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana. Mitaky ny handoavana ny vatsim-pianarana tsy voaloha. mijaly ny mpianatra , bokan-trosa ny Ray aman-dReny, tsy afaka mody izy ireo fa sady tsy misy vola hatao saran-dalana no voatazona any amin'ny sekoly sy ny tompon-trano ny pasipaoro
Ho an’ Andriamatoa Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita,
Voninahitra ho anay mpianatra vatsian’ ny fanjakana Malagasy fianarana aty Sina no manao izao fanambarana izao:
Araka ny fampanantenana izay nataonao Andriamatoa Filohan’ny fahefana Avon’ny Tetezamita tany Macau ny 22 Martsa 2013 lasa teo handoa ny volanay 18 volana tsy voaloa hatramin’ izay na ny‘’arrieres’’ ianao izay nanomezanao toky ho tanterahina amin’ ity volana jolay diavintsika ity.
Vahaolana haingana noho izany no takianay satria betsaka ny olana mianjady : maro ny mpianatra manofa trano ivelan’ ny Oniversite ka efa nogiazan’ ny tompon – trano ny passeport noho ny tsy fandoavana hofan – trano volana maromaro, ny Ray aman-dReny efa bokan’ny trosa sady efa lany fananana namidy nandritra ny roa taona, ny olana ara-pahsalamana eo ihany koa.
Manantena ny fahendrenareo Ray aman – dReny mpitondra fanjakana mahefa handoa ny vatsim-pianaranay 18 volana miaraka amin’ ny fampitaovana tsy voaloa.
← Madagascar: changement... Ity Madagasika antsika... →